Ugcino lweeNkonzo - i-NJ kunye ne-NY yeNdawo yeNdawo, uMkhenketha, uKhuselo loKubhengeza kunye namaGqwetha asebambiseni
ikhaya / iinkonzo
Singakunceda ulungiselele umyolelo, kunye nomyolelo wokuphila / ulwalathiso lwonyango oluphambili, okanye wenze itrasti yokukhusela iiasethi zakho. Amagqwetha ethu eNtsha e-New Jersey aza kukunceda njengomphathi welifa olilawulayo. Siza kusebenza kunye nabaxhamli egameni lakho, kwaye silawule abanikeli bempahla ukuba ufuna uncedo.
Le firm yasekwa ukunceda ukonga izindlu zabantu ekuchazeni. Amaqabane ethu onke ajolise kukhuseleko lwembonakalo nokuba yeyaseNew Jersey okanye eNew York. Siyayiqonda eyona nto iphambili ekusombululeni isibonakaliso sokwenzakaliswa kwangaphambili, ukuguqulwa kwemalimboleko, ukungabinamali okanye ukuthengisa / ukuthengisa ixesha elifutshane. Sisebenza nabantu ukuthenga nokuthengisa izindlu nomhlaba. Singakwazi ukuchaza iieances zomthetho kunye nendlela nganye yezi nkqubo enxibelelana ngayo. Ukuthetha negqwetha namhlanje malunga nokukhetho lwakho kunokuthatha ubunzima bokukhathazeka esifubeni sakho.
Ukubhengezwa njengongenamali, kubandakanya ukungabhengezwa kwemali yaseNew Jersey kunye nokuchithakala kweNew York, ziinkqubo zenkundla zomdibaniso ezenzelwe ukunceda bobabini abathengi kunye namashishini ukuphelisa okanye ukuhlawula amatyala abo phantsi kokhuseleko lwenkundla yokubambisa. Umthetho we-federal kwi-Title 11 yeKhowudi ye-United States ilawula ukungabinamali kweNew Jersey kunye nazo zonke ezinye izinto ezinamatyala.
Imalimboleko yeMali mboleko
Ukudibana noluntu, okanye ukubonisana nje, yinkqubo elawulayo ethi igalelo loluntu kwimicimbi ebachaphazelayo ifunwe. Iinjongo zayo eziphambili kukuphucula ukusebenza, ukucaca kunye nokuzibandakanya.
Ukuba ufuna igqwetha eNew York okanye eNew York, kuba ubanjiwe okanye ufuna ukumangalela umntu, thetha nomnye wabameli bethu malunga nokhetho lwakho. I-New Jersey neNew York zineentlobo ezahlukeneyo zeenkundla zamatyala ezahlukeneyo.
ENgilani, umthwalo wobungqina kwiinkqubo zembambano ngokubanzi, unezinto ezininzi ngaphandle kwenkqubo yokuzibek 'ityala ngesidima sikawonkewonke, ubungqina bokulungelelana kwamathuba. Kumatyala embambano kwiMaldives, umthwalo wobungqina ufuna
Umthetho wolwaphulo-mthetho liqumrhu lomthetho elihambelana nolwaphulo-mthetho. Ilawula indlela yokuziphatha kwabantu kwaye iprinte nantoni na eyoyikisayo, enobungozi, okanye ngenye indlela ebeka emngciphekweni impahla, impilo, ukhuseleko, kunye nokuziphatha kwabantu. Kubandakanya ukohlwaywa
Ukulamla, uhlobo lwesisombululo sembambano (i-ADR), yindlela yokusombulula iimbambano ngaphandle kweenkundla. Amaqela kwimbambano ayithumela kulamlo ngumntu okanye abantu abaninzi ("abagwebi", "abagwebi" okanye "abagwebi abangamachule
Isixhobo somthetho yigama elisemthethweni lobugcisa elisetyenziselwa naluphi na uxwebhu olubhaliweyo olwenziwe ngokusemthethweni olunokuthi lwenziwe ngokwombhali, iirekhodi kwaye lubonise ngokusemthethweni isenzo, inkqubo, okanye umsebenzi wekhontrakthi, uxanduva, okanye
UkuSonjululwa kweSiphikiso seRhwebo
Ukusonjululwa kwempikiswano yinkqubo yokusombulula iimbambano phakathi kwamaqela.Imithetho yomthetho ibonelela ngezisombululo zeentlobo ezininzi zeembambano. Abanye abaphikisi abayi kufikelela kwisivumelwano ngenkqubo yokusebenzisana. Ezinye iimpikiswano zifuna i
I-inshurensi yindlela yokhuselo ekulahlekelweni yimali. Luhlobo lolawulo lomngcipheko olusetyenziswa ikakhulu ukubiyela umngcipheko wecala elinokubakho, lokulahleka okungazinzanga.Iziko elinikezela i-inshurensi yaziwa ngokuba yinkampani yeinshurensi, inkampani yeinshurensi, okanye